अल्पायुमै अस्ताए प्रतिभावान् कलाकार तथा साहित्यकार अर्जुन खालिङ | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
काठमाडौं, मंसिर ३०- प्रतिभावान् कलाकार तथा साहित्यकार अर्जुन खालिङ मृत फेला परेका छन् । बुधबार दिउँसो कोटेश्वरस्थित आफ्नै डेरामा उनी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको परिवारजनले जनाएको छ ।
सोलुखुम्बु जुभिङ स्थायी घर भएका खालिङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ललितकला विधामा २०५८ सालको ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ थिए । स्नातकोत्तर सकेर व्यावसायिक पेन्टिङमा लागेका उनी अहिले आदिवासी जनजातिको आवाजलाई क्यान्भासमा उतार्ने अभियानमा थिए । उनले किराती पुर्खा तयामा, खियामा र रैछाकुलेको स्केच (चित्र) बनाएका थिए । उनको ‘गोयाङको सुगन्ध’ र ‘सूर्य डढिरहेछ’ कवितासंग्रह प्रकाशित छन् । सीमान्तकृतहरूको पहिचानलाई पेन्टिङको विषय बनाएर उनले सैयौं चर्चित पेन्टिङहरु गरेका थिए । खालिङ केही समयअघिसम्म पेन्टिङ बिषयमा अध्यापन गराउँथे ।
तीन दर्जन प्रदर्शनीमा सहभागी भइसकेका अर्जुनले ‘पेन्टिङ–संघर्ष’ कालमा सोलुखुम्बुको लुक्ला र मुस्ताङको जोमसोममा आर्ट ग्यालरी खोलेका थिए । त्यसपछि उनले काठमाडौंको बौद्धमा ग्यालरी चलाए। यसपछि उनले सीमान्तकृतहरूको पहिचानलाई पेन्टिङ बिषय बनाएर अभियान्ताको रुपमा सक्रिय थिए । ‘चिन्डो बुक्स’, ‘चिन्डो फेसन’ उनकै परिकल्पना हो । उनी राम्रा कलाकार र कवि मात्रै थिएनन्, सांस्कृतिक अभियान्ता समेत थिए । ‘चिन्डो बुक्स’, ‘चिन्डो फेसन’ यी अभियान अन्र्तगत उनले केही साथीहरु सहित सुरु गरेका थिए ।
उनी पछिल्लो समय संघीय समाजवादी फोरमको संघीय सांस्कृतिक महासंघका महासचिव थिए । मृत्युको कारणबारे विवरण आउन सकेको छैन । प्राध्यापनपछि उनी पछिल्लो समय चिन्डो प्रा.लि.का अध्यक्ष थिए । उनी फेसनमार्फत् किराती संस्कृतिलाई प्रर्बद्धनमा गर्न लागि परेका थिए ।
उनको मृत्युको कारण भने अझैं खुलेको छैन । स्रोतका अनुसार उनी झुन्डिएको अवस्थामा डेरामा भेटिएका थिए । उनको पोष्टपार्टमको लागि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ ।
गठबन्धनको १२ दिने आन्दोलनको घोषणाः जुलुस, र्याली र विरोध सभासम्म
संविधानले तोकेको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र बनेनन्
Posted by admin on Dec 14 2016. Filed under Breaking News, पत्रपत्रिकाबाट, समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry